अपराधमुक्त काठमाडौं: घरधनी र भादावालको बिवरन लिदै प्रहरी । | | Basobaas
अपराधमुक्त काठमाडौं बनाउने भन्दै प्रहरीले काठमाडौंका सबै घरधनी र डेरावालाको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको छ । काठमाडौंमा रहेका सबै वृत्त र प्रभागहरुको नेतृत्वमा काठमाडौं प्रहरीले विवरण संकलन अभियान सुरु गरेको हो ।
काठमाडौं जिल्लामा मात्रै रैथाने र बाहिरबाट आएका गरी झण्डै ३० लाख मानिसको बसोबास रहेको अनुमान छ । त्यस्तै, दुईपांग्रे र चारपांग्रे गरी करिब १० लाख सवारीसाधन काठमाडौंका सडकमा गुड्छन् ।
चाहिएको सबै सूचना तत्काल प्राप्त गर्न सकिने र को–कहाँ बस्छ भन्ने सूचनाले प्रहरीलाई सुरक्षा प्रबन्धका लागि सहज हुने परिसर काठमाडौंका एसएसपी विश्वराज पोखरेलको बुझाइ छ । उनका अनुसार घरधनीको विवरणसँगै डेरामा बस्नेको नागरिकता नम्बरदेखि सवारी साधनको नम्बरसमेत प्रहरी कार्यालयमा घरधनीले प्रहरीलाई बुझाउनुपर्नेछ । यो अभियान सुरु भइसकेको र केही दिनमा प्रहरीसँग सबै तथ्याङ्क र विवरण आइपुग्ने पोखरेल बताउँछन् ।
के छ प्रहरीको फारममा ?
प्रहरीले सबै घरधनीलाई एउटा फारम उपलब्ध गराउनेछ । फारममा सुरुमा घरधनीको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ । घरधनीको वास्तविक नामदेखि बोलाउने नाम पनि समावेश गर्नुपर्नेछ । जसमा टोल, मार्ग, वडा, नागरिकता नम्बर, जिल्ला सबै विवरण भर्नुपर्नेछ ।
त्यसपछि घरभाडामा बस्नेहरुको सम्पूर्ण विवरण पनि घरधनीले नै भर्नुपर्नेछ । जसमा नाम, बोलाउने नाम, स्थायी ठेगाना, पेशा व्यवसाय, उमेर, सवारीसाधन भए त्यसको नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यतिमात्रै होइन, भाडामा बस्न सुरु गरेको मिति, सरेर आएको स्थान, टेलिफोन नम्बर, नागरिकता नम्बर आदि पनि लेख्नुपर्नेछ । यो फारम प्राप्त गरेको मितिले ७ दिनभित्र भरेर पाँच रुपैयाँको टिकट टाँसेर प्रहरीलाई बुझाउनुपर्ने एसएसपी पोखरेलले बताए ।
के हुन्छ विवरण राख्दा ?
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी पोखरेलको बुझाइमा यो विवरणबाट काठमाडौंको सुरक्षामा ठूलो फाइदा पुग्नेछ । उनी भन्छन्– “सबै विवरण हामीसँग भए पहिले त को–कहाँ बस्छ के गर्छ भन्ने विवरण हामीसँग हुन्छ । यसले निगरानी गर्न सहयोग पुग्छ । कहाँ के गर्ने भन्ने जानकारी पनि प्रहरीलाई हुन्छ ।”
पोखरेलका अनुसार कतिपय जिल्लाबाट भागेर आएका अपराधीको डाटा प्रहरीसँग हुन्छ र घरधनीले दिएको विवरणबाट त्यो पनि खुल्न सक्छ । काठमाडौंमै पनि प्रहरीले धेरैलाई खोजिरहेको हुन्छ, यस्तो अवस्थामा विवरणबाट अपराधीको सम्पूर्ण सूचना प्रहरीसम्म पुग्ने उनको विश्वास छ ।
काठमाडौंमा अहिले ३३ सय प्रहरी कार्यरत छन् । कम जनशक्तिले धेरै सुरक्षा धान्नुपर्ने अवस्थालाई यो विवरणपछि सहज हुने प्रहरीको दाबी छ ।
विवरण नभरे कारबाही
प्रहरीले विवरण नभर्ने घरधनी वा भाडावालालाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । फारमको एक प्रति घरधनीले राख्नुपर्ने र प्रहरी जुनसुकै बेला चेकजाँचका लागि आएको अवस्थामा विवरण फरक परे कारबाही गरिने एसएसपी पोखरेलले बताए । “यो अभियान काठमाडौंकै नागरिकका लागि हो, सबैको सहयोग चाहिन्छ,” उनले भने ।